Mampikolay ireo mpanjifa hatrany ny hafitsoky ny zotra 135 mampitohy an’Ankadimbahoaka sy Mahazo satria mbola tsy ampy amin’ny 7 ora hariva akory dia efa hody, hono, ry zareo ary hatreo Andravoangy ihany no fetran’ny fahafahany mitatitra olona.
Mijaly ny voafonja eto Madagasikara raha ny tatitra nentin-dry zareo avy eo anivon’ny Amnesty international. Mila fandraisana andraikitra sy fanajariana satria ao ireo nigadra vokatry ny hala-botry madinika kanefa tsy voatsara amin’izao fotoana izao ary ny sasany aza moa dia maty ho azy any am-ponja any mihitsy, raha ny tatitra voaray hatrany.
Nahafinaritra ireo mpitazana ny nahita ny filalaovana mozika ifarimbonan’ireo kandida ho filoham-pirenena tao anaty tambajotran-tserasera tao. Ny kandida Beriziky teo amin’ny aponga maro anaka, Imbeh teo amin’ny gitara basy ary Radilofe teo amin’ny Piano.